မအေးတော့ပမေဲ့လညျး အနှေးထညျလေး ဝတျနတေုနျးပဲ
Homeမအေးတော့ပမေဲ့လညျး အနှေးထညျလေး ဝတျနတေုနျးပဲ
SUPPORTMM November 02, 2021
ကြှနျတျောက အနှေးထညျ ဝတျရတာ ကွိုကျတယျ။ ဒီတော့ နညျးနညျးလေး အေးပွီဆိုတာနဲ့ ဝတျတာပဲ။ တဈခါမှာတော့ တပညျ့တဈယောကျက နောကျတယျ၊ ဆရာကလညျး ပဲမြားလိုကျတာ၊ ရာသီဥတုကဖွငျ့ မအေးတော့ဘဲနဲ့ တဲ့။ အဲဒါနဲ့ သူ့ကို ဟာသလေးတဈခု ပွောပွပွီး ပွနျခပြေရတယျ။
တဈခါတုနျးက လူတဈယောကျဟာ ခုမှ သငျတနျးဆငျးလာတဲ့ ဆံသဆရာဆီမှာ ဆံပငျသှားညှပျတယျ။ ခုမှ တတျလာစ ဆိုတော့ ပညာတှပွေခငျြနတောပေါ့လေ။ ညှပျနလေိုကျတာမြား တျောတျောနဲ့ကို မပွီးဘူး။ အဲဒါနဲ့ ဟိုလူက ပွောရော၊ ခငျဗြား ညှပျလို့မပွီးသေးဘူးလား၊ ဒီမှာ ဆံပငျတောငျ ကုနျတော့မယျဆိုတော့ ဆံသဆရာက ပွနျပွောတယျ၊ ခငျဗြားဆံပငျကသာ ကုနျတော့မှာ၊ ကြုပျပညာက မကုနျသေးဘူးဗြ တဲ့။
ဆိုလိုတာက ဆံပငျကနျြကနျြ၊ မကနျြကနျြ သူတတျထားသမြှ ပညာတှတေော့ ထုတျသုံးရမှာပဲ ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့လေ။ ကြှနျတျောလညျး အဲ့လိုပဲပေါ့၊ ရာသီဥတုကသာ မအေးတော့ပမေဲ့ အနှေးထညျတှကေ မကုနျသေးဘူး ဆိုတော့ ဝတျနရေတုနျးပဲ။
ဟုတျပွီ၊ ပွုံးလို့ပွီးပွီဆို ဒီဟာသလေးကို ခြဲ့ပွီး ဆကျတှေးကွညျ့ရအောငျ။
ဆံသဆရာ ဆံပငျညှပျနတောက ဆံပငျ ရှိခွငျး မရှိခွငျးပျေါ မမူတညျဘူး။ သူ ညှပျခငျြလို့ ညှပျတာ။ ကြှနျတျော အနှေးထညျ ဝတျတာသညျလညျး အေးလို့ မဟုတျဘူး။ ဝတျခငျြလို့ကို ဝတျတာ။ ဒါသညျပငျလြှငျ ဒီနခေ့တျေမှာ လူပွောတအားမြားလာတဲ့ Passion ပဲ ဖွဈတယျ။ ခတျေစားနလေို့ ဒိုငျဗငျဝငျထိုးတာ မဟုတျဘူး၊ လူပွောမြားနလေို့ ပျေါပငျဝငျလုပျတာ မဟုတျဘူး၊ ကိုယျ့ရဲ့ စိတျဆန်ဒပွငျးပွမှုသပျသပျသာ ဖွဈတယျ။
အဲ့လို Passion မရှိတဲ့အခါ ကြှနျတျောတို့တှဟော မှနျတဈခပျြနဲ့ တူနတေယျ။ ကိုယျ့ရှေ့ မတျတပျလာရပျသူက ပွုံးရငျ ပွနျပွုံးပွတယျ၊ မဲ့နရေငျ ပွနျမဲ့ပွတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ ရပျတညျခကျြက ကိုယျ့ရှေ့ လာရပျသူပျေါ မူတညျတယျ။ ရာသီဥတု မအေးတော့လို့ အနှေးထညျခြှတျလိုကျသလို၊ မဖွဈနိုငျပါဘူးကှာ လို့ တဈယောကျယောကျက ပွောတာနဲ့ လကျလြှော့လိုကျတယျ။ အောကျက ပရိသတျက စိတျမဝငျစားတဲ့ဟနျ နညျးနညျးလေး ပေါကျလိုကျတာနဲ့ စငျပျေါမှာ ကိုယျပွောမယျလို့ ပွငျဆငျထားသမြှတှေ မပွောတတျတော့ဘူး၊ မကေု့နျပွီ။ တဈခါလေး ရှုံးနိမျ့လိုကျတာနဲ့ ငါကတော့ ဘယျနရောမှာမှ သုံးမရတဲ့သူ ဖွဈပွီလို့ သတျမှတျလိုကျကွပွီ။
တကယျတော့ မဖွဈနိုငျပါဘူးလို့ ဘယျသူက ပွောပွော၊ ကိုယျမှနျတယျထငျရငျ ရှဆေ့ကျတိုးရမှာ။ အဲဒီလိုသာ အပကျြစကားကို နားယောငျတတျခဲ့ရငျ ဒီနခေ့တျေ လူတှလေေးစားနကွေရတဲ့သူ တျောတျောမြားမြား ဒီနလေို့ အခွအေနေ ဖွဈမလာခဲ့ဘူး။ အောကျက လူတှေ စိတျဝငျမစားရုံမကလို့ လှောငျပွောငျနပေါစေ၊ ကိုယျပွောမယျ့ အကွောငျးအရာကို ဆုံးတဲ့အထိ ဆကျပွောရဲခဲ့တဲ့ ကြောငျးသား မောငျအောငျဆနျးဟာ တဈခြိနျမှာ လူတကာ လကျဖြားခါရတဲ့ အဟောအပွောကောငျးသူ ဖွဈလာခဲ့တာ အဲဒီလို ခေါငျးမာတတျမှုကွောငျ့ပဲ။ လောကမှာ အောငျမွငျနသေူတိုငျးကိုလညျး မေးကွညျ့လိုကျပါဦး၊ မရှုံးနိမျ့ဖူးဘူးလားလို့။ တကယျတော့ သူတို့တှဟော မရှုံးနိမျ့ဖူးသူတှေ မဟုတျဘူး၊ အရှုံးမပေးဖူးသူတှသော ဖွဈတယျ။
အနှေးထညျကို သူမြားတှကေ အေးလို့ဝတျတာ၊ ကိုယျကတော့ ဝတျခငျြလို့ အေးနတော။ ဒီနှဈခုက တူမလိုလိုနဲ့ မတူဘူး။ ဘယျအခါ သိသာသှားလဲဆိုတော့ မအေးတော့တဲ့အခါမှာပဲ။ မအေးတော့တဲ့အခါ အနှေးထညျဝတျရတာကို တကယျမကွိုကျသူက ခြှတျလိုကျတယျ။ ကွိုကျတဲ့သူကပဲ ဆကျဝတျတယျ။
တကယျတော့ အားပေးခံနရေလို့ အားတကျနတော Passion မဟုတျဘူး။ အားလုံးက ဝိုငျးတားနတေဲ့ကွားက ခေါငျးမာမာနဲ့ ဆကျလုပျမယျဆိုမှ Passion ။ လုပျတိုငျး ဖွဈနလေို့ ဆကျလုပျနမေိတာ Passion မဟုတျဘူး။ အရှုံးတှခေညျြး ကွုံနရေတာတောငျ မဖွဈဖွဈအောငျ လုပျမယျဆိုတာကမှ Passion ။ ရညျးစားစကားပွော၊ အဖွပွေနျပေး၊ ခဈြသူတှေ ဖွဈသှားကွတာက Passion မဟုတျဘူး။ ပွနျမခဈြနိုငျတာ သိသိကွီးနဲ့ တဈသကျလုံး ခဈြသှားမယျ ဆိုတာကမှ Passion ။
ပွောရရငျ အေးတဲ့အခြိနျတော့ လူတိုငျး အနှေးထညျဝတျတာပေါ့။ မအေးတော့ပမေယျ့လညျး ဝတျနဖေို့ ဆိုရငျတော့ အဲဒီအနှေးထညျကို တကယျခဈြမှ ရမယျ။ အဲဒီလို အေးအေး၊ မအေးအေး ဆကျဝတျနမေယျ ဆိုတဲ့သူတှကေပဲ သူတို့ကငျြလညျရာနယျပယျမှာ ဘုရငျ ဖွဈလာကွတာပဲ။ မအောငျမွငျခငျတော့ အရူးလို့ ပွောခံရမှာပေါ့။ ဒါပမေယျ့ အဲဒီလို အရူးဆိုတဲ့သူတှကေိုပဲ သာမနျလူတှကေ အားတှကြေ၊ Role model အဖွဈ ထားနရေတာကို မမပေ့ါနဲ့။
အဲဒီလို ကမ်ဘာကြျောအရူးတှထေဲက တဈယောကျဖွဈတဲ့ စတိဗျဂြော့ဘျဈရဲ့ စကားတဈခှနျး ရှိပါတယျ။
People who are crazy enough to think that they can change the world are the ones who do.
ကမ်ဘာကွီးကို ပွောငျးလဲနိုငျမယျလို့ သူတို့ကိုယျသူတို့ ယုံကွညျတဲ့သူတှသော အမှနျတကယျ ပွောငျးလဲပဈနျိုငျတဲ့သူတှေ ဖွဈလာကွတယျတဲ့။
ဘာကိုပွောတာလဲဆို ကိုယျ့ကိုယျကိုယျယုံကွညျမှုကို ပွောတာ၊ ရူးသှပျမှုကို ပွောတာ၊ စိတျဆန်ဒပွငျးပွမှုကို ပွောတာ ဖွဈပါတယျ။
ကိုယျပဈခငျြတဲ့ ပဈမှတျကို ထိဖို့ လေးနဲ့ မွှား ရှိရုံနဲ့ မလုံလောကျဘူး။ ပဈနိုငျစှမျး ရှိရတယျ။ အဲဒီအပွငျ မွှားခကျြက အရှိနျအဟုနျ ပွငျးပွငျးနဲ့ ထိုးစိုကျသှားနိုငျဖို့အတှကျ Passion လိုသေးတယျ။
ဒါကွောငျ့မို့ အောငျမွငျပြျောရှငျခငျြတဲ့သူ ဘယျသူမဆိုပေါ့လေ၊ ရာသီဥတုက မအေးတော့ပမေဲ့လညျး ဆကျဝတျနဦေးမယျ ဆိုတဲ့ အနှေးထညျလေး တဈထညျလောကျတော့ ရှိကိုရှိရပါမယျ။ မြားပွားလှတဲ့ အဆိုတျောတှေ၊ မြားပွားလှတဲ့ စာရေးဆရာတှေ၊ မြားပွားလှတဲ့ သငျတနျးကြောငျးတှေ၊ စတဲ့ စတဲ့ အပွိုငျအဆိုငျတှကွေားထဲမှာ အရညျအခငျြးခငျြး တူလာတဲ့အခါ ကိုယျ့ကို အမြားထကျ ခေါငျးတဈလုံး သာစမှော အဲဒီ Passion ပဲ ဖွဈပါတယျ။
မအေးတော့ပေမဲ့လည်း အနွေးထည်လေး ဝတ်နေတုန်းပဲ
ကျွန်တော်က အနွေးထည် ဝတ်ရတာ ကြိုက်တယ်။ ဒီတော့ နည်းနည်းလေး အေးပြီဆိုတာနဲ့ ဝတ်တာပဲ။ တစ်ခါမှာတော့ တပည့်တစ်ယောက်က နောက်တယ်၊ ဆရာကလည်း ပဲများလိုက်တာ၊ ရာသီဥတုကဖြင့် မအေးတော့ဘဲနဲ့ တဲ့။ အဲဒါနဲ့ သူ့ကို ဟာသလေးတစ်ခု ပြောပြပြီး ပြန်ချေပရတယ်။
တစ်ခါတုန်းက လူတစ်ယောက်ဟာ ခုမှ သင်တန်းဆင်းလာတဲ့ ဆံသဆရာဆီမှာ ဆံပင်သွားညှပ်တယ်။ ခုမှ တတ်လာစ ဆိုတော့ ပညာတွေပြချင်နေတာပေါ့လေ။ ညှပ်နေလိုက်တာများ တော်တော်နဲ့ကို မပြီးဘူး။ အဲဒါနဲ့ ဟိုလူက ပြောရော၊ ခင်ဗျား ညှပ်လို့မပြီးသေးဘူးလား၊ ဒီမှာ ဆံပင်တောင် ကုန်တော့မယ်ဆိုတော့ ဆံသဆရာက ပြန်ပြောတယ်၊ ခင်ဗျားဆံပင်ကသာ ကုန်တော့မှာ၊ ကျုပ်ပညာက မကုန်သေးဘူးဗျ တဲ့။
ဆိုလိုတာက ဆံပင်ကျန်ကျန်၊ မကျန်ကျန် သူတတ်ထားသမျှ ပညာတွေတော့ ထုတ်သုံးရမှာပဲ ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့လေ။ ကျွန်တော်လည်း အဲ့လိုပဲပေါ့၊ ရာသီဥတုကသာ မအေးတော့ပေမဲ့ အနွေးထည်တွေက မကုန်သေးဘူး ဆိုတော့ ဝတ်နေရတုန်းပဲ။
ဟုတ်ပြီ၊ ပြုံးလို့ပြီးပြီဆို ဒီဟာသလေးကို ချဲ့ပြီး ဆက်တွေးကြည့်ရအောင်။
ဆံသဆရာ ဆံပင်ညှပ်နေတာက ဆံပင် ရှိခြင်း မရှိခြင်းပေါ် မမူတည်ဘူး။ သူ ညှပ်ချင်လို့ ညှပ်တာ။ ကျွန်တော် အနွေးထည် ဝတ်တာသည်လည်း အေးလို့ မဟုတ်ဘူး။ ဝတ်ချင်လို့ကို ဝတ်တာ။ ဒါသည်ပင်လျှင် ဒီနေ့ခေတ်မှာ လူပြောတအားများလာတဲ့ Passion ပဲ ဖြစ်တယ်။ ခေတ်စားနေလို့ ဒိုင်ဗင်ဝင်ထိုးတာ မဟုတ်ဘူး၊ လူပြောများနေလို့ ပေါ်ပင်ဝင်လုပ်တာ မဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြမှုသပ်သပ်သာ ဖြစ်တယ်။
အဲ့လို Passion မရှိတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ မှန်တစ်ချပ်နဲ့ တူနေတယ်။ ကိုယ့်ရှေ့ မတ်တပ်လာရပ်သူက ပြုံးရင် ပြန်ပြုံးပြတယ်၊ မဲ့နေရင် ပြန်မဲ့ပြတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ရပ်တည်ချက်က ကိုယ့်ရှေ့ လာရပ်သူပေါ် မူတည်တယ်။ ရာသီဥတု မအေးတော့လို့ အနွေးထည်ချွတ်လိုက်သလို၊ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာ လို့ တစ်ယောက်ယောက်က ပြောတာနဲ့ လက်လျှော့လိုက်တယ်။ အောက်က ပရိသတ်က စိတ်မဝင်စားတဲ့ဟန် နည်းနည်းလေး ပေါက်လိုက်တာနဲ့ စင်ပေါ်မှာ ကိုယ်ပြောမယ်လို့ ပြင်ဆင်ထားသမျှတွေ မပြောတတ်တော့ဘူး၊ မေ့ကုန်ပြီ။ တစ်ခါလေး ရှုံးနိမ့်လိုက်တာနဲ့ ငါကတော့ ဘယ်နေရာမှာမှ သုံးမရတဲ့သူ ဖြစ်ပြီလို့ သတ်မှတ်လိုက်ကြပြီ။
တကယ်တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ ဘယ်သူက ပြောပြော၊ ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရင် ရှေ့ဆက်တိုးရမှာ။ အဲဒီလိုသာ အပျက်စကားကို နားယောင်တတ်ခဲ့ရင် ဒီနေ့ခေတ် လူတွေလေးစားနေကြရတဲ့သူ တော်တော်များများ ဒီနေ့လို အခြေအနေ ဖြစ်မလာခဲ့ဘူး။ အောက်က လူတွေ စိတ်ဝင်မစားရုံမကလို့ လှောင်ပြောင်နေပါစေ၊ ကိုယ်ပြောမယ့် အကြောင်းအရာကို ဆုံးတဲ့အထိ ဆက်ပြောရဲခဲ့တဲ့ ကျောင်းသား မောင်အောင်ဆန်းဟာ တစ်ချိန်မှာ လူတကာ လက်ဖျားခါရတဲ့ အဟောအပြောကောင်းသူ ဖြစ်လာခဲ့တာ အဲဒီလို ခေါင်းမာတတ်မှုကြောင့်ပဲ။ လောကမှာ အောင်မြင်နေသူတိုင်းကိုလည်း မေးကြည့်လိုက်ပါဦး၊ မရှုံးနိမ့်ဖူးဘူးလားလို့။ တကယ်တော့ သူတို့တွေဟာ မရှုံးနိမ့်ဖူးသူတွေ မဟုတ်ဘူး၊ အရှုံးမပေးဖူးသူတွေသာ ဖြစ်တယ်။
အနွေးထည်ကို သူများတွေက အေးလို့ဝတ်တာ၊ ကိုယ်ကတော့ ဝတ်ချင်လို့ အေးနေတာ။ ဒီနှစ်ခုက တူမလိုလိုနဲ့ မတူဘူး။ ဘယ်အခါ သိသာသွားလဲဆိုတော့ မအေးတော့တဲ့အခါမှာပဲ။ မအေးတော့တဲ့အခါ အနွေးထည်ဝတ်ရတာကို တကယ်မကြိုက်သူက ချွတ်လိုက်တယ်။ ကြိုက်တဲ့သူကပဲ ဆက်ဝတ်တယ်။
တကယ်တော့ အားပေးခံနေရလို့ အားတက်နေတာ Passion မဟုတ်ဘူး။ အားလုံးက ဝိုင်းတားနေတဲ့ကြားက ခေါင်းမာမာနဲ့ ဆက်လုပ်မယ်ဆိုမှ Passion ။ လုပ်တိုင်း ဖြစ်နေလို့ ဆက်လုပ်နေမိတာ Passion မဟုတ်ဘူး။ အရှုံးတွေချည်း ကြုံနေရတာတောင် မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်မယ်ဆိုတာကမှ Passion ။ ရည်းစားစကားပြော၊ အဖြေပြန်ပေး၊ ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားကြတာက Passion မဟုတ်ဘူး။ ပြန်မချစ်နိုင်တာ သိသိကြီးနဲ့ တစ်သက်လုံး ချစ်သွားမယ် ဆိုတာကမှ Passion ။
ပြောရရင် အေးတဲ့အချိန်တော့ လူတိုင်း အနွေးထည်ဝတ်တာပေါ့။ မအေးတော့ပေမယ့်လည်း ဝတ်နေဖို့ ဆိုရင်တော့ အဲဒီအနွေးထည်ကို တကယ်ချစ်မှ ရမယ်။ အဲဒီလို အေးအေး၊ မအေးအေး ဆက်ဝတ်နေမယ် ဆိုတဲ့သူတွေကပဲ သူတို့ကျင်လည်ရာနယ်ပယ်မှာ ဘုရင် ဖြစ်လာကြတာပဲ။ မအောင်မြင်ခင်တော့ အရူးလို့ ပြောခံရမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို အရူးဆိုတဲ့သူတွေကိုပဲ သာမန်လူတွေက အားတွေကျ၊ Role model အဖြစ် ထားနေရတာကို မမေ့ပါနဲ့။
အဲဒီလို ကမ္ဘာကျော်အရူးတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ စတိဗ်ဂျော့ဘ်စ်ရဲ့ စကားတစ်ခွန်း ရှိပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲနိုင်မယ်လို့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ယုံကြည်တဲ့သူတွေသာ အမှန်တကယ် ပြောင်းလဲပစ်နိ်ုင်တဲ့သူတွေ ဖြစ်လာကြတယ်တဲ့။
ဘာကိုပြောတာလဲဆို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုကို ပြောတာ၊ ရူးသွပ်မှုကို ပြောတာ၊ စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြမှုကို ပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ပစ်ချင်တဲ့ ပစ်မှတ်ကို ထိဖို့ လေးနဲ့ မြှား ရှိရုံနဲ့ မလုံလောက်ဘူး။ ပစ်နိုင်စွမ်း ရှိရတယ်။ အဲဒီအပြင် မြှားချက်က အရှိန်အဟုန် ပြင်းပြင်းနဲ့ ထိုးစိုက်သွားနိုင်ဖို့အတွက် Passion လိုသေးတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်ချင်တဲ့သူ ဘယ်သူမဆိုပေါ့လေ၊ ရာသီဥတုက မအေးတော့ပေမဲ့လည်း ဆက်ဝတ်နေဦးမယ် ဆိုတဲ့ အနွေးထည်လေး တစ်ထည်လောက်တော့ ရှိကိုရှိရပါမယ်။ များပြားလှတဲ့ အဆိုတော်တွေ၊ များပြားလှတဲ့ စာရေးဆရာတွေ၊ များပြားလှတဲ့ သင်တန်းကျောင်းတွေ၊ စတဲ့ စတဲ့ အပြိုင်အဆိုင်တွေကြားထဲမှာ အရည်အချင်းချင်း တူလာတဲ့အခါ ကိုယ့်ကို အများထက် ခေါင်းတစ်လုံး သာစေမှာ အဲဒီ Passion ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ခြိုသာတဲ့ ညိုပွာ January 7, 2022 at 4:22 AM
𝑪𝒉𝒆ပွောခဲ့တဲ့ "တျောလှနျရေးဟာ ခဈြခွငျးမတ်ေတာပဲ"၊ ကွီးမွတျတဲ့အခဈြစိတျကွောငျ့ဖွဈတညျလာတယျ" ဆိုတာ တကယျမှနျတယျ
နှဦေးတျောလှနျရေးမှာ ရငျဘတျတူသူ တစိမျးတှေ ခငျမငျရငျးနှီးလာကွတယျ၊
တယောကျမကျြနှာတယောကျ မကွညျ့ခငျြလောကျအောငျ မုနျးလှပါခညျြရဲ့ဆိုသူတှေ
PDF သူရဲကောငျးတှဟောလညျး အမှနျတရားကို
"တျောလှနျရေးဆိုတာ ခဈြခွငျးမတ်ေတာပဲ" မှနျတယျ 𝑪𝒉𝒆 ..
ThourA March 10, 2022 at 11:03 PM
M February 26, 2022 at 6:00 AM
Don't tell people your dreams,Show them.
Chu Zim February 26, 2022 at 6:05 AM
Click လို့ရတုနျး click 🥰🥰🥰
Unknown March 1, 2022 at 5:36 AM
naychi March 1, 2022 at 10:24 PM
ThourA March 8, 2022 at 7:01 PM
ja see say March 16, 2022 at 4:51 PM